FAQ | हार्ट ग्यालक्सी कल्चर (बेइजि)) कं, लिमिटेड
चिनियाँ फिल्महरूमा किन लगानी गर्ने र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई के फाइदा हुन्छ?
हाम्रो वेबसाइटमा सूचीबद्ध सबै चलचित्रहरू मुख्यतया मुख्य भूमि चीनमा रिलीज हुन्छन्। किनकि हाम्रो मनपर्ने फिल्महरू पनि चिनियाँ बजारको अवस्थाका अनुसार चयन गरिन्छ, घरेलू फिल्म बजार, पोष्ट बक्स अफिस र घरेलु सार्वजनिक स्वादको आधारमा।
चिनियाँ फिल्म बजार द्रुत विकासको अवधिमा छ।
चार कारणले ठूलो फिल्ममा बृद्धि गर्दै चीन फिल्म बक्स कार्यालय बनाउँछ।
(१) चीनको ठूलो जनसंख्या।
(२) व्यक्तिको औसत आम्दानीमा द्रुत गतिले बृद्धि भएकोले सिनेमामा खाजाको जस्तो फिल्म देख्न सजिलो हुन्छ।
()) राज्यले फिल्म उद्योगमा नीतिलाई जोसका साथ समर्थन गर्दछ।
()) ग्लोबल COVID-१ of को गम्भीर अवस्था अन्तर्गत चिनियाँ बजार अद्वितीय छ र पूर्व बजारमा सुधार आएको छ। फिल्मको बक्स अफिस निरन्तर बढ्दैछ।
तल डाटा हेर्नुहोस्, हामी चीन फिल्म बक्स अफिसको लागि एक ठूलो विकास कोठा देख्न सक्छौं।
(COVID-19 को कारण २०२० उपेक्षा गर्नुहोस्, तर यस बजार बजार पुनर्स्थापना गरिएको छ)
एक उदाहरणको रूपमा एक रिलिज गरिएको चलचित्र लिनुहोस्, यदि मैले १०,००,००० युआन लगानी गरेको छु भने, म अन्तमा कति नाफा लिन सक्छु?
सामान्यतया, चलचित्रको बक्स अफिसका लागि producer 35% देखि%%% निर्माताको बाँकी छ, सिनेमा शेयर र अन्य शुल्कहरू बाहेक, लगानीकर्ताहरूले लगानीको अनुपातको अनुरूप राजस्व प्राप्त गर्न सक्दछन्।
उदाहरण को लागी, HI, आमा, फिल्म यस फेब्रुअरी १२ मा जारी गरियो, यस बर्षको वसन्त महोत्सव। उत्पादन लागत २०० मिलियन हो, अन्तिम बक्स अफिस 5..4१ बिलियन हो, यदि तपाईंले १०,००,००० आरएमबी लगानी गर्नुभयो भने तपाईं कम्तीमा अन्तमा777,१०० प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
चलचित्र HI, आमा
लगानी रकम (RMB) राजस्व (RMB)
१००k77 77,१००
300k 84 २,841१,3००
500k , ,,735,,500००
1000k ,,, .71१,०००
मलाई कसरी अन्तिम बक्स अफिस नम्बरहरू थाहा छ र म कहाँबाट नम्बरहरू प्राप्त गर्छु?
चलचित्र बक्स अफिसका लागि सबैभन्दा प्राधिकृत वास्तविक-समय डाटा अपडेट अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो, म्यानय्यान चलचित्र, www.maoyan.com भनिन्छ, मोबाइलमा पनि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्दछ। त्यसोभए तपाईं सबै चलचित्रहरूको वास्तविक-समय बक्स अफिस हेर्न सक्नुहुनेछ।